WTN ၏ ဒုဥက္ကဌ Alain St.Ange သည် အာဆီယံ၏ သမုဒ္ဒရာရေရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ၊
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » WTN ၏ ဒုဥက္ကဌ Alain St.Ange သည် အာဆီယံ၏ သမုဒ္ဒရာရေရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ၊
နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • သတင်း • တာဝန်ရှိသော • Seychelles Breaking News • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား • UAE အထူးသတင်း
Alain St.Ange သည် သမုဒ္ဒရာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအကြောင်း ဟောပြောသည်။
မှရေးသား Linda S. Hohnholz
Seychelles ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ မြို့ပြလေကြောင်း၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ရေကြောင်းဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဟောင်း Alain St.Ange သည် အဆင့်မြင့်ဖိုရမ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် ဒူဘိုင်းသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ St. Ange သည် လက်ရှိတွင် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး၏ ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ယက် (WTN) နှင့်သမ္မတ အာဖရိကခရီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့ (ATB).
ဝန်ကြီးဟောင်း St.Ange အား အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ရန်နှင့် ဂေဟ-အဏ္ဏဝါခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ၎င်း၏အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေရန် ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသည်။ အပြာရောင်စီးပွားရေး ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ကျွန်းစုများ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားအတွက်။
Dubai Expo 2020 တွင် အာဆီယံနေ့ တွင်ကျင်းပမည်-
နေ့စွဲ: ဒီဇင်ဘာလ 10, 2021
အချိန်- နေ့လည် ၂း၃၀ မှ ၅း၀၀ (ဒူဘိုင်း GMT+2)
Business Connect Centre, 6th floor
2020 ကလပ် - ဒူဘိုင်းကုန်စည်ပြပွဲ
ဝန်ကြီးဟောင်း St.Ange သည် ဖိုရမ်၏ အသေးစား အလတ်စား စီးပွားရေး AFRICA ASEAN (FORSEAA) ၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှား ဝန်ကြီးများနှင့် ထင်ရှားသော ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဟောပြောသူ အများအပြားလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
“ဒီအဆင့်မြင့်ဖိုရမ်ကနေတစ်ဆင့် အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ကမ်းရိုးတန်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ပင်လယ်ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဘုံအမြင်ကို မျှဝေဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ” ဟု အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ Dato Lim Jock Hoi က ပြောသည်။
Alain St.Ange သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Saint Ange Tourism Consultancy ကို စီမံခန့်ခွဲပြီး World Tourism Network (WTN) ၏ ဒုတိယဥက္ကဌ ဖြစ်သည့် Alain St.Ange သည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ လအတန်ကြာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်စေရန်နှင့် အာဖရိကနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် နယ်ပယ်များကို စူးစမ်းရှာဖွေရန်၊ . “ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ဒီအထူးအဆင့် ကျွမ်းကျင်သူတွေစုဝေးမှုမှာ ဟောပြောသူအဖြစ် ဖိတ်ကြားခံရတဲ့အတွက် တကယ်ကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ Seychelles အလံကို လွှင့်တင်တော့မှာမို့ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေကို လက်ရှိသူတွေကို ဝေမျှပေးရင်း တခြားသူတွေဆီကနေ သင်ယူနိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးကို ရရှိမှာပါ” ဟု Alain St.Ange က ပြောကြားခဲ့သည်။
Linda Hohnholz သည်အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သည် eTurboNews နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်။
သူမသည်ပရီမီယံပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများနှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အားလုံးကိုတာဝန်ယူသည်။
Hoareau Myrose says:
6:2021 မှာဒီဇင်ဘာလ 16, 22